Sababta loo joojiyey cunista xayaawanadaas ayaa lagu sheegey in bilihii la soo dhaafay 66 qof u dhinteen cudurka Ebola, baadhtaan ka dibna la ogaaday in laqa qaado cunista hilibka fiidmeerta.
"Waan ogahay in dad badani jecel yihiin maraqa fiidmeerta, laakiin waxaa laga qaadayaa xanuun aan dawo iyo ka hor tag midna lahayn oo la yiraahdo Ebola" ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee dalka Gini Remy Lamah oo la hadlayey dad diidanaa mamnuucida Cunista fiidmeerta.
Wasiirka ayaa hadalkiisa ku daray inuu sidoo kale xarrimay in la cuno jiirka iyo daayeerka oo iyaguna gudbiya xanuuno khatar ah. "Waxaan kula talinayaa dadka reer Gini inay cunaan wixii aan caafimaadkooda wax u dhimaynin, ayna iska dhaafaan xayawaanadaas aan soo sheegey oo qaba xanuuno aan dawo lahayn" ayuu yiri wasiirka caafimaadka ee dalka Gini.
Xanuunka Ebola ayaa u gudbay wadamada Siira Liyoon iyo Laybeeriya oo jaar la ah dalka Gini. Xanuunkan oo laga qaado xayawaanka ayaa markii ugu horeysay lagu arkay dalkii la oran jirey Zaire hadeerna loo yaqaan Jamhuuriyada Dimoqraadiga Koongo sanadkii 1976kii. Xanuunkan oo aanay dadku kala qaadin, laakiin ka qaadaan xayawaanka ayaa la sheegay dadka uu ku dhacaa inay 90% u dhintaan.
Ben Nauman oo macalin ka ah Jaamacadda london ayaa sheegaya in fiidmeertu tahay xayawaanka ugu badan ee xanuunkan qaba, sidaa darteed si kastoo loo kariyo hilibkeeda aan laga dili karin faayraska keena Ebola. "Waxaan kula talin lahaa in aduunkoo dhan laga mamnuuco cunista fiidmeerta si looga badbaado khatarta cudurka Ebola" ayuu Ben Neuman ku soo gebagebeeyey hadalkiisa.
Dalka Gini dadka ku nool 85% waa Muslimiin, Kiristaankuna waa 10%, halka diinlaawayaashu ka yihiin 5%.